Ungalulinganisa njani ifuthe lokuKhangela kweAlgorithm? | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 14, 2015 NgoLwesibini, Aprili 14, 2015 Douglas Karr
Sithumele ngamanyathelo ayimfuneko thintela ilahleko ephawulekayo yokugcwala kwitrafikhi ngophendlo lweselfowuni kuGoogle iza ngeveki ukusukela ngoku. Abahlobo bethu kwi-gShift bebejonge esweni utshintsho kwaye bapapasha kakhulu Ubunzulu beposi kwimpembelelo elindelekileyo yotshintsho lwealgorithm.
Ukulinganisa uluvo lwabarhwebi kunye nokuqokelela izimvo kolu tshintsho lubalulekileyo, i-gShift yenze uphando ngaphezulu kwe-275 yeentengiso zedijithali kumashishini ohlukeneyo kubandakanya ukuthengisa, ukuhamba kunye neemoto. Siqhube olu vavanyo phakathi kuka-Matshi 25-Epreli 2 kwaye ngaphezulu kweepesenti ze-65 zabathathi-nxaxheba yayingabenzi bezigqibo kwinqanaba eliphezulu ngezihloko ezisuka kuMlawuli ukuya kwiCMO. Iimpendulo esizifumeneyo zibonise umbono onomdla wokuba iingcali zeshishini zilulungiselela njani utshintsho lwe-21 ka-Epreli.
Kuyathakazelisa ukuba ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abathengisi bedijithali bakholelwa ukuba impembelelo iya kuba nkulu… kodwa okona kubangela usizi kukuba abo bathengisi bedijithali abanandlela yokujonga ifuthe. Isoftware yobukho bewebhu ye-gShift ibeka esweni indawo yakho kuphando lweselfowuni.
Ungayilungiselela inkampani yakho iGoogle ka-Epreli 21st isoftware ye-algorithm yotshintsho kunye ne-gShift eyenzelwe wena Ingxelo yeBenchmark yeSelfowuni Yobukho bakho bewebhu okwangoku obukwidesktop vs. mobile. Kwaye qiniseka ukuba ufumana idemo yeqonga labo- kuyamangalisa!
tags: April 21uphendlo lweselfowuni lukaGoogleI-algorithm yokukhangela ngefowunigshiftzenqanaba mobileuphendlo lweselfowunimobile seo